Ngathi | I-Mit-ivy yeShishini Co, Ltd.
IMIT-IVY ISHISHINI CO., LTD
IMIT -IVY Imichiza yeMveliso yeChemicals, Ltd. ngumvelisi ophambili kunye nomrhwebi weekhemikhali kangangeminyaka eli-16 eye yamisela iifektri zayo ezi-4 ezinezixhobo zemveliso epheleleyo kunye nolawulo olucokisekileyo nolondolozo loomatshini.
Sisebenzisa iteknoloji yokuvelisa phambili kunye neendlela zokuvavanya ukuqonda ukuveliswa kwemveliso, ukulawula umgangatho ukuhlangabezana nomgangatho. Sivunyelwe yi-SGS, ISO9001, ISO140 01, GB / HS16949 kunye ne-T28001.
Ezona mveliso ziphambili zeMit-Ivy zibandakanya oku kulandelayo：
Iidayi eziphakathi, iziyobisi eziphakathi.kulungile .sikhethekileyo iikhemikhali
I-CI Isiseko esimthubi 2 "ICrystal violet lactone CVL Methyl violet" Oluhlaza oluSisiseko 4
Iidyestuffs, iziyobisi eziphakathi, iziyobisi eziphakathi, izinto zokubambelela, iiarhente zokubambelela kunye namanye amashishini. iveliswa yitekhnoloji yamva nje esemgangathweni ozinzileyo kunye nococeko olungaphezulu kwama-99.7%.Iimarike zethu eziphambili zibandakanya iMelika, iIndiya, iAfrika, iIndonesia, iTurkey, uMzantsi-mpuma weAsia, iNtshona Asia nezinye. Singumthengisi ophambili weemveliso zamachiza kungekuphela nje kuphela kodwa nakwiimarike zamanye amazwe. Icandelo leemveliso eziphambili zeMIT-IVY zabelana ngama-97% kwimarike yasekhaya egxile kwimveliso nakulawulo, Sinokubonelela ngeemveliso ngeendleko ezikhuphisanayo. ngomgangatho weprimiyamu kunye nexabiso kwaye wamkelekile ukudibana.
I-Industrial anhydrous Sodium sulphate powder yenye yezinto ezisisiseko zeemichiza, ezisetyenziswa ngokubanzi kwimichiza, iphepha kunye neglasi, idyestuff, ukushicilela kunye nokudaya, ukuhlamba impahla kunye namashishini amayeza. Isetyenziselwa ukwenziwa kwefayibha eyenziweyo, isikhumba, isinyithi esingenantsimbi, i-porcelain enamel njalo njalo. Imveliso ye-Industrial anhydrous sodium sulfate of pureity and fluidity good, egubungela uluhlu lwemveliso ye-20 mesh - 2000 mesh, ikakhulu esetyenziswa kwizenzi, iireagents Ibhetri, iiglavu zelatex, izitshabalalisi zitshabalalisi, izichumisi, abenzi bamayeza kunye nezongezo zokutya kunye neminye imimandla, kunye Ukuphuhliswa koqoqosho lwesizwe kunye nokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu kunxulumene ngokusondeleyo.
1. Umxhasi ngowokuqala. Sizama ukuzisa ingeniso ephezulu kubaxumi bethu ngokusekwe kuncedo olufanayo.
2. Ukuthembeka yeyona nto ibalulekileyo.
3. Ulawulo lomgangatho sisiseko sethu.
4. Uluvo olukhulu loxanduva.
Siya kuba noxanduva kungekuphela kwiimveliso zethu, abathengi bethu, abathengisi bethu kodwa noluntu.
Siyabambelela ekuzuzeni uluntu, kwaye sihlala sidala ixabiso kubathengi, sibambe ingqibelelo kunye nokuxhamla kunye nokuchuma okuqhelekileyo.Sinabasebenzi bezobuchwephesha bokuqala kubuchwephesha kuphando lwemveliso kunye nophuhliso. Ke sinako ukubonelela ngezixhobo ezingundoqo eziphambili zeprojekthi yakho kunye nokunciphisa isisombululo sakho sokudibanisa ukukunika iimveliso ezisulungekileyo. Yiba noxanduva kubaxumi bethu, abasebenzi, okusingqongileyo kunye noluntu ngamanyathelo akhawulezileyo kunye nempumelelo yezoqoqosho. Sijonge kwangethuba ukumisa iikhrayitheriya zendalo kunye nezentlalo kwishishini lethu silandela iindlela ezintsha, ezizinzileyo. Itekhnoloji kuqala, umgangatho njengesiseko, umthengi njengoThixo, ingqibelelo njengesiseko ".
Eyona njongo yethu iphambili:
Ngokusekwe kwimizamo eqhubekayo yokuphuhlisa iinkalo zamachiza amatsha, sinikezela ngemveliso enobume bendalo kunye nobuchwephesha ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu.
IMIT-IVY INDUSTRY izimisele ukukukhonza ngokuzinikela.
Isampula yokuxhasa 1
Ukupakisha kwe-2 nako kunokuba yimfuneko yabathengi
Nayiphi na imibuzo iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24
4. Ixabiso leFektri.
5. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza. Sinentsebenziswano elungileyo nabathumeli abaninzi abaqeqeshiweyo; Singathumela iimveliso kuwe nje ukuba uqinisekise iodolo.
Singasebenza ukuhanjiswa ngenqanawa, sidibana ne-MOQ yomzi-mveliso Siza kucwangcisa ukuthunyelwa okulandelayo ukusuka kumzi-mveliso wethu ukuya kwindawo yokugcina izinto.
Singazidibanisa iiodolo zakho ezincinci ezivela kwimizi-mveliso emininzi, sihambisa zonke zisebenzisa eyona ndlela ineendleko ezifanelekileyo. Ngexesha lokufakwa kweodolo, siya kunika iinkcukacha malunga nomthamo wento nganye kunye nokuba loluphi uhlobo lwesitya esiza kusetyenziswa.
Sinikezela ngephakeji efanelekileyo elwandle, silungiselela yonke into de imveliso ifike kwindlu yakho yokugcina okanye kwindawo yokuhambisa.
-Usebenzisa owakho umthuthi weempahla
-FOB kwizibuko lase China
-CIF kwizibuko elikufutshane nawe
Nokuba unomthumeli wakho okanye ungathanda ukuhlela ukuhanjiswa; nokuba ukhetha i-FOB okanye i-CIF, siyavuya ukucaphula kunye nokubonelela nangayiphi na indlela oyikhethayo. Nceda uzive ukhululekile ukuxoxa ngazo zonke iindlela onokukhetha kuzo nathi.